पैसा खाडीमा होइन, नाडीमा हुन्छ, स्वदेशमै खोजौँ: गभर्नर नेपाल – ejhajhalko.com
पैसा खाडीमा होइन, नाडीमा हुन्छ, स्वदेशमै खोजौँ: गभर्नर नेपाल
१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:३५ 220 पटक हेरिएको
कुनै पनि मुलुकका नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग निर्धक्क र खुला रुपमा कारोबार गर्नका लागि प्रदान गरिने चेतना नै वित्तीय साक्षरता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई एउटा प्रमुख एजेण्डाका रुपमा राखेको छ । सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता
खासगरी नेपालको सन्दर्भमा ग्रामिण क्षेत्रका मानिसमा वित्तीय साक्षरताको कमी छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता मानिसहरुलाई ‘तार्गेट’ गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना शाखा विस्तार गर्न जोड दिइरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई स्थापनाको इजाजत दिँदा पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा पुग्न नसकेका दुर्गम गाउँमा जान तयार हुनेलाई मात्रै केन्द्रीय बैंकले ‘लाइसेन्स’ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक, वित्त बढे, कारोबारी बढेनन्
अझै ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दैनन् भन्ने तथ्यांकले बताउँछ । त्यसमध्ये ४२ प्रतिशत नागरिक मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन्छन् भने ५२ प्रतिशतले पैसा राख्छन् । युवामध्ये २० प्रतिशत युवा त बैंकमा कारोबार नै गर्दैनन् । यसको मतलव अरुसँग पैसा नै नभएर कारोबार नगरेका हैनन् । पैसा भए पनि गोजीमा वा सिरानी मुनी राखेर सुतिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो बिडम्बना र ठूलो चुनौतीको विषय हो । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वा तीनका शाखाचाहिँँ दिन प्रतिदिन बढ्ने तर कारोबार गर्ने मानिसचाहिँ बढ्न नसक्नु समस्याकै विषय हो ।
वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख दुई चुनौती
यहाँ दुईवटा समस्यालाई प्रमुख रुपमा केलाएर हेर्नुपर्छ । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्रामिण क्षेत्रका समुदायमा पुग्न नसकेका वा त्यस्ता धेरै ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगिसक्दा पनि मानिसहरु कारोबार गर्न नआइरहेको अवस्था । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र पटक–पटकको जोडबलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा पनि गईरहेका छन् । यतापट्टी वित्तीय साक्षरताको अभियान जारी छ । तर, मानिसहरु अझै बैंकमा कारोबार गरिरहेका छैनन् । त्यसैले यहाँ केही कुरा मिलिरहेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । प्रयास पनि गरिरहेको तर खास उपलब्धी नदेखिएकाले अब सबैले वित्तीय साक्षरता बढाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल जारी राख्नुपर्छ ।
वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ पनि वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो ठाउँबाट त्यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ र आवश्यक पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हौसला प्रदान गर्नेछ । ग्रामिण क्षेत्रमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डराउन हुँदैन । आफै जग बसालेर काम गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ ।
बैंक बुझेमात्र कारोबारी बढ्छन्
बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका तर कारोबारीहरु आकर्षित हुन नसकेका ठाउँमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम आफै संचालन गर्न सक्छन् । किनकि, जब मानिसले बैंकमा कारोबार गर्दा, बीमा गर्दाका फाइदाबारे जान्दछन्, तबमात्र बैंकमा कारोबार गर्न आउँछन्, बीमा गराउँछन् ।
समृद्धिको बाधक बनेको संस्कृति
हामीसँग एउटा यस्तो संस्कृति छ, जुन संस्कृति सफलताको बाधक बनिरहेको छ । अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा–दीक्षा दिन्छन्, ठूलो र सफल मानिस बनाउन चाहान्छन् । तर, बिडम्बना उनीहरुले आफ्नो सन्तानलाई पैसाको बारेमा कहिले सिकाउँदैनन् । त्यसैले ती सन्तानले पैसाको सदुपयोग, यसको महत्व र परिचालनबारे जान्ने अवसर पाउँदैनन् । जब पैसाको महत्व र यसको प्रयोगबारे जान्दैन भने एउटा मान्छे जीवनमा कसरी सफल हुन सक्दछ ? हामीले सोच्ने बेला आइसकेको छ ।
धनी मुलुकको उदाहरण
संसारमा जति पनि धनी मुलुक छन्, ती थोरै पैसाबाटै धनी हुन सफल भएका हुन् । त्यस्ता देशमा सन्तान र अभिभावकबीच दिनको एकपटक पैसाको बारेमा छलफल हुन्छ । अर्थात, यो कपडा कति पर्यो, तरकारी, चावल, नून, तेल कति पर्यो, किन भाउ बढिरहेको, सेयरमा कसरी लगानी गर्ने भनेर छलफल हुन्छ । तर, हामीकहाँ पैसाबारे कहिले कुरा हुँदैन । यहाँ त, आफ्ना सन्तानलाई पढाइन्छ र पढिसकेकपछि भनिन्छ, ‘ल बाबु अब जागिर गर ।’ तर, जब उसले पैसा अहिलेसम्म बुझेको छैन भने जीवनमा अरु के गरोस् । अनि ऊ जागिरको लागि भौतिरिन्छ । केही लागेन भने बिदेशिन्छ ।
हामी किन गरीब भयौँ ?
हामी गरीब हुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो कि हामीले पैसाको महत्व बुझ्न सकेनौँ । पैसाको बारेमा थाहा नपाएकै कारणले अहिले लाखौँ युवा अर्काको देशमा गएर श्रम बेच्नुपरेको अवस्था छ । तर, पैसा त हाम्रै मुलुकमा पर्याप्त छ । यहाँ रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नागरिकलाई नै पैसा दिन बसेका हुन् । टोल–टोलमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्था नागरिकको जीवन समृद्ध र उद्यमशील बनोस भनेर पैसा बाँड्नकै लागि बसेका हुन् । उनीहरुले पैसा दिएबापत ब्याजका रुपमा कमिशनजस्तो केही रकम लिन्छन् । उनीहरुले दिने रकम सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने किन जानुपर्यो विदेश ? यस्ता कुरा नागरिकले बुझ्नुपर्छ । तबमात्रै हामी गरीबीको चपेटालाई सजिलै पञ्छाएर अघि बढ्न सक्छौँ । भविष्यका चुनौतिलाई सजिलै ‘फेस’ गर्न सक्छौँ । त्यसैले अहिले नेपालीहरुलाई वित्तीय ज्ञानको आवश्यकता परेको हो ।
भारत र चीनबीचमा हामी किन यस्तो ?
आफूसँग भएको पैसालाई सकेसम्म कम खर्च गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्ने, बचत गर्ने, अनुत्पादक काममा पैसा खर्च नगर्नेलगायतका चेतना हुनु नै वित्तीय ज्ञान हो । त्यसैले आफ्ना सन्तानलाई वित्तीय ज्ञान प्रदान गर्न अभिभावकहरुले पनि यसबारे थाहा पाउनु जरुरी छ । आज भारत र चीन किन उदयीमान शक्ति राष्ट्रका रुपमा अगाडी आए । भारतका हरेक युवाहरुमा वित्तीय ज्ञान छ, उनीहरु उत्पादनमूलक व्यवसायमा लागेका छन् । भारतीयहरु यहाँ आएर काम गरेर यहाँको पैसा उता लैजान्छन र जम्मा गर्छन् । तर, हामी त्योभन्दा बढी पैसा पाउँदा पनि जम्मा गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
सुविधा पनि लिन नसकिरहेको अवस्था
वित्तीय ज्ञानको कमीले गर्दा यहाँ नागरिकहरुले पाउने विशेष सुविधा पनि लिन नसकिरहेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति नै लिएको छ । जसअनुसार एक प्रतिशत व्याजदरमा विशेष कर्जा दिइन्छ, ४/५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषि विशेष व्याजअनुदान नै दिइन्छ । जसलाई कृषिमा केही गर्छु भन्ने जोश जाँगर छ, उसले लिन सक्छ । त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट समूहगत रुपमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । ती संस्थाबाट तीन लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण लिन सकिन्छ । सुदूरपश्चिमका १० जिल्लाहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकेरै भनेको छ, ती जिल्लाहरुमा व्यापार, व्यवसायजस्ता उत्पादनमूलक काम गर्न चाहनेलाई १ प्रतिशत व्याजमै ऋण दिइन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले दिएको यस्तो सुविधा माग्न आउनेको संख्या औँलामै गन्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिममा कृषि कर्जा पनि एकदमै कम गएको देखिन्छ । जबकी पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान दिएर सरकारले ऋण दिँदैछ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि सरकारले यसरी दिएका सुविधाहरु नागरिकले लिन सक्नुपर्छ । यी सब चुनौतिको एउटै कारण हो, वित्तीय साक्षरताको कमी । त्यसैले बढीभन्दा बढी नागरिकलाई वित्तीय ज्ञान प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउनका लागि सरकार, सरोकार राख्ने संस्था र सम्बन्धित सबैले पहल गर्नुपर्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीबि नेपालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यमा आधारित)